She thought she foundahome after fleeing Ukraine. Two weeks later she was homeless
ဘာရယ်တော့ ဟုတ်ရပေါင် ရှင်... စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဒီအထဲ ဝင်ကြည့်တာနေတာရယ်ပါ..။
ကိုရင်ကြီးက လုံးဝ ဘာမှမရေးတော့ပေမယ့် ကျွန်မ ခင်လေးငယ်ကတော့~~~~~~
ဒီနေရာလေး >>>>ခင်လေးငယ်<<<< မှာ ဟိုရောက်ဒီပေါက် ရေးမိရေးရာ တိုတိုထွာထွာ လေးတွေ ရေးဖြစ်နေမိပါကြောင်း....
မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း မောင်နှမအပေါင်း ကျန်းမာလန်းဖြာလို့ ချမ်းမြေ့ခြင်းအတိ ရှိနိုင်ကြပါစေ... ☆彡
အချိန် 10:34 PM0ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 2:42 PM2ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 10:17 PM9ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 2:47 PM 13 ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 12:07 PM6ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 1:55 PM 17 ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
ဖွတ် ဖွံ့ဖြိုးဖို့... ဖွတ်ဖွဲ့ ဖွဲ့..။
အချိန် 8:55 PM 16 ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
အချိန် 8:13 AM6ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
Labels: ပြုံးစရာကဗျာ (ကိုရင်နော်)
“သတင်းတွေ ကြားပြီးပြီလား xxx..xxx....xxxx..xxxx...xx”
“ရှူး..!! တိုးတိုး.. ... xxx... ... xxx”
“စိတ်ကို မဝင်စာဘူး.. မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာ..... xx ...xxx ..”
“ဟာ.. ဒါတော့ လွန်တာပေါ့.. xxx.. xx.. xxx.. xxx ....”
“အေးလေ မဖြစ်သင့်ဘူး....xx ..xx”
“ဟေ့လူ.. တိုးတိုး ပြောပါဆို.. .. xxx .. xxx xxxx ....”
“အမှန်တကယ်ဆိုဗျာ.. ဖြစ်သင့်တာက.. xxx.. xxx...”
“တအိမ်တက်ဆင်း ဆိုပဲ... xx..xxxx...xxx..xxxx”
“..xxx...xxx.....xxx.. ဒါဆို ဘာထူးမှာလဲကွာ..”
“...xxx ..xx..xxx မဟုတ်ဘူးလား ကျုပ်ပြောတာ..”
“(၃) နာရီ တိတိ တဲ့..xxx..xx”
“အေးကွ ရာဘာ ဖိနပ်ကြီးနဲ့..xxx..xxx...xxx”
“ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်လေ.. xxx...xxx...xx....xxxx..”
“...xxx..xxx....အဲ့ဒါပေါ့ .. ”
“...xx..xxx..လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်ကြကွာ.. xxx.. xx..xx...”
“ထမင်းမှန်မှန် စားနေရရင် ပြီးတာပဲ..xx..xxx...xx”
“တသက်လုံး ငါးပိရည်နဲ့ စားချင်လို့လား..xx..xxx..xx”
“လိုင်းက တက်ကိုမတက်ဘူးပဲ.. xx..xxx..xx”
“အဲ့ဒါလည်း ပုံတူကူးတာပဲကွ.. xx..xxx..xx”
“ဘယ်လို..! အီသီယိုပီးယား နဲ့တူတယ် ဟုတ်လား....xx..xxx...xx”
“ကျွန်တော်ပြောတာဗျာ... ဒီလို..xx... xxx.. xxx.. ”
“မင်္ဂလာဒုံကိုသွားမှာ လှည်းတန်းလောက် ရောက်လည်း နည်းလား..!! တဲ့..xx..xxx..”
“ရပ်နေတာထက်စာရင် နည်းနည်း ရွေ့ကြည့်တဲ့ သဘော တဲ့..xx..xxx..xx”
“ဟိုက အများကွာ သူတို့က လေးငါးယောက်..xx..xxx..xx”
“ဝိုင်းပြီး နှိပ်ကွပ်ထားလိုက်ရင် သွားရော..xxx..xx”
“..xx..xxx..xx.. တခြားစီပဲ..xx..xxx..xx.. သူဆီ သင်တန်း သွားတက်ခိုင်းရမယ်..”
“ဟားဟားဟား ဒီဘဲကြီးကတော့ ထစ်အ ထစ်အ နဲ့..xx..xxx..xx”
“စိတ်ရောလူရော နစ်ပြီး လုပ်နေတာပဲ..xxx..xx”
“သူ့ကိုယ်သူ သုဘရာဇာ လို့ကို ခံယူလိုက်တော့တာ..xxx..xx”
“ဒါပေါ့ ဘဝသရုပ်ဖော် ဇာတ်ကား စစ်စစ် ဆိုတာ..”
“...xxx.. xxx ”
“ဘာ..!!! ပုဆိုးလှန်ပြတယ်..!!.. ဟုတ်လား..xxxx..xxx..xx”
အချိန် 10:17 AM 11 ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့
Tropical Storm GIRI မုန်တိုင်း ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတဆင့် ဝင်ရောက်လာသော Tropical Storm GIRI သည် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အရှိန်ပြင်းစွာ တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်ကာ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သတိပြုနိုင်ရန်နှင့် မုန်တိုင်း အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် မုန်တိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော Link များအား မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Tropical Storm GIRI နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား Tropical Storm Risk (TSR) တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ စောင့်ကြည့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၁) မုန်းတိုင်းဝင်ရောက်ပုံနှင့် ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း ပြပုံ
၂) (၂၃-၁၀-၂၀၁၀) မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၇း၀၀) အချိန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပုံ
၃) (၂၂-၁၀-၂၀၁၀) နေ့တွင် တင်ခဲ့သော ပုံများအား ပုံ (၁)၊..... ပုံ (၂)၊..... ပုံ (၃)၊ တွင် ပြန်ကြည့်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဆိုဒ်မှ ခန့်မှန်းပုံများ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ နှင့် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှု အဆင့်အတန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရက်စက်စွာ ဝင်ရောက်ခဲ့သော နာဂစ်(စ်) မုန်တိုင်း (၁) ဝင်ရောက်ပုံ နှင့် (၂) ရန်ကုန်မြို့အားတိုက်ခိုက်ပုံ link များနှိပ်၍ ပြန်ကြည့်ကာ သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
Tropical Storm Risk (TSR) ဆိုဒ်တွင် ပုံကြည့်ရန်အညွန်း
၁) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ပြသထားသည့် မျှားအား နှိပ်၍ကြည့်နိုင်သည်။
၂) ညာဘက် Side Bar တွင် Tropical Storm Tracker အောက်ရှိ GIRI ဆိုသော စာသားအား နှိပ်၍ ကြည့်နိုင်သည်။
၃) Side Bar တွင် ဖေါ်ပြထားသော Tropical Storm Wind Probabilities များကို နှိပ်၍ကြည့်နိုင်သည်။
၄) ခန့်မှန်းပြ ပုံများသည် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများ ဖော်ပြထားသည့် ဆိုဒ်များ
၁) Severe cyclonic storm Giri ) ( Cyclone hits Myanmar coast
၂) The Global Disaster Alert and Coordination System (Red alert for Tropical Cyclone GIRI-10 for Myanmar)
၃) Emirates Meteorology Portal
၄) Myanmar Climate Change Watch (ဦးထွန်းလွင်)
၅) မြန်မာပြည်သို့ ဦးတည်နေသော Cyclonic GIRI မုန်တိုင်းနှင့် တရုတ်ပြည် ကမ်းရိုးတန်းဘက် ဦးတည်နေသော Typhoon MEGI မုန်တိုင်းကြီး
၆) Freedom News Group (ကြားဖြတ်အထူးသတင်း)
၇) မိုးမခ (Cyclone Giri entering into Rakhine State of Burma with 120 mph)
၈) NASA (Cyclone Giri - Northern Indian Ocean)
အချိန် 11:00 AM3ယောက်က ဒီလိုပြောသွားကြလေရဲ့